Maxay ahayd sababta Abiy Ahmed looga musaafrin rabay dunida? - BBC News Somali
Maxay ahayd sababta Abiy Ahmed looga musaafrin rabay dunida?
28 Sebtembar 2018
Image caption Qaraxa ayaa waxa uu dhacay isla markii uu Mr Abiy uu khudbadiisa soo gebagabeeyay
Dacwad oogeyaasha dalka Itoobiya ayaa maxkamad soo taagay shan qof oo lagu tuhunsanyahay argagixisannimo, iyagoo loo heysto iney isku dayeen dilka ra'iisul wasaare Abiy Axmed ka dib markii bishii Juun ay bam gacmeed ku tureen fagaare uu ku sugnaa.
Weerarkaas oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa , ayaa lagu dilay labo ruux, halka in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen, balse waxyeello kama aysan soo gaarin Mr Abiy.
Eedeysaneyaasha ayaan ilaa haatan hadlin.
Tan iyo markii uu xilka qabtay bishii Abriil, Mr Abiy ayaa soo bandhigayay isbadallo xiriir ah oo isugu jira dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo dublomaasiyadda, kuwaasoo si weyn loo soo dhaweeyay.
Bambada ayaa 23-kii bishii Juun lagu tuuray fagaaraha Meskel Square ee magaalada Addis Ababa, xilli ay tobannaan kun oo qof oo taageera u ah Abiy Axmed ay ku sugnaayeen fagaaraha si khudbaddiisa ay u dhageystaan.
Ra'iisul wasaaraha ayaa si deg deg ah goobtaas looga kaxeeyay, ka dib markii uu qaraxa dhacay.
Xilligaas waxa uu weerarkaas ku tilmaamay "isku day lagu guul darreystay oo ay sameeyeen xoogag aan dooneyn iney Itoobiya midowdo".
Image caption Waxaa fagaaraha isugu yimaaday kumanaan qof oo taageera u ah Mr Abiy
Shanta ruux ee la tuhunsanyahay - oo lagu kala magacaabo Getu Girma, Birhanu Jafar, Tilahun Getachew, Bahiru Tollosa, iyo Desalegn Teafaye - ayaa waxaa wajiyadooda ka muuqday walwal aad u xooggan xilligii ay maxkamadda ka soo hor muuqanayeen, sida uu ku soo warramay wariyaha BBC-da ee laanta Axmaariga Kalkidan Yibeltal.
Dacwad oogeyaasha ayaa sheegay in dadkan la tuhunsanyahay aysan aaminsaneyn in Mr Abiy uu badbaadin karo danaha qoomiyadda ugu tirada badan dalkaas ee Oromada.
Maxaa loo haystaa Cabdi Maxamuud Cumar?
Ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya oo raaligalin bixiyay
Ra'iisal wasaaraha oo qudhiisa ka soo jeeda qoomiyadda Oromada, ayaa xilka la wareegay ka dib saddex sano oo ay dalkaas ka socdeen rabshado ay sameynayeen bulshada Oromada, oo dalbanayay in la soo af jaro waxa ay ugu yeereen maamulka ku faquuqayay dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Waxaa dacwad oogeyaasha laga soo xigtay in eedeysaneyaasha la maxkamadeynayo ay doonayeen in ururkii mar la mamnuucay ee oromada(OLF) loo oggolaado iney dib u billaabaan hogaaminta dalka.
Isbedallada uu sameeyay Ra'iisal wasaaraha ayaa xayiraadda looga qaaday ururkaas oo ay hadda masuuliyiintiisa dib ugu laabteen Itoobiya.
Hogaamiyihii dibad joogga ahaa ee kooxdaas ayaa waddanka dib ugu soo laabtay 15-kii bishan Siteembar.
Xukuumaddii hore ee Itoobiya ayaa OLF u aqoonsaneyd inuu yahay urur argagixiso.
Abiy Axmed ayaa tan iyo markii uu maamulka la wareegay bishii Abriil wuxuu muujiyay inuu yahay siyaasi uu nidaamkiisa xasiloonyahay, wuxuuna fasaxay qeybo ka mid ah ganacsiyadii ay dowladdu gacanta ku heysay, isagoo sidoo kalena hoos u dhigay cadaawaddii waddankiisa kala dhaxeysay dalka dariska la ah ee Eritrea.